हाजिमेटे नो गल सिजन २ मे तपाईले सोचेको भन्दा नजिक - क्र्याडल दृश्य
हाजिमेटे नो गल सिजन २
by Dima 26th अक्टोबर 2021 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड Hajimete no Gal सिजन2मा तपाईले सोचे भन्दा नजिक हुन सक्छ
Hajimete no Gal धेरै लोकप्रिय छ इच्छी एनिम टाइप गर्नुहोस्। सन् २००८ मा रिलिज भएपछि यो चर्चाको शिखरमा पुग्यो 2017। यो एनिमे धेरै राम्रोसँग प्राप्त भएको थियो र धेरै माझ प्रशंसक मनपर्ने थियो। यस लेखमा, हामी किन हाजिमेट नो गल सिजन २ सम्भावित छ, र यो रिलीज हुने समयको व्याख्या गर्नेछौं।
यो मंगा यसका लागि एनिमे अझै पनि लेखिएको छ र सुस्त हुने कुनै संकेत देखाउँदैन, सबैभन्दा नयाँ मंगा संस्करण २०२१ को शुरुमा जारी हुँदैछ। यस लेखमा, हामी यो किन हो भनेर छलफल गर्नेछौं। महत्त्वपूर्ण र यसको लागि के अर्थ हुन सक्छ Hajimete no Gal सीजन।।
Hajimete no Gal एक Harem कमेडी र रोमान्स संग मिश्रित एनिम टाइप गर्नुहोस्। यसले केहि मिठा टोनहरू पनि लिन्छ। (प्रतिद्वन्द्वी) चरित्र, याम, प्रशंसकहरू द्वारा धेरै राम्रोसँग स्वागत गरिएको थियो र उनले पक्कै पनि यो शृङ्खलालाई अगाडि बढाइन् जहाँ यो जानको लागि थियो। जुनिची मुख्य पात्र एक प्रकारको हारेको छ र स्कूलमा केटीहरू तर सबैलाई याद गरिएको छैन।
यामलाई पुरानो विद्यार्थीले दबाब दिएको छ।
उसको साथीहरूले उसलाई सेट नगरेसम्म उसले सोध्यो याम, उसको अनुमति बिना उनको लकरमा कार्ड राखेर। नजानेर उसलाई, याम उसलाई मन पराउँछ जब उसले उसलाई स्वीकार गर्छ र वास्तवमा उनीसँग बाहिर जान स्वीकार गर्दछ।
यो क्षण विस्तारित हुन्छ, जब याम पछि पूरै कक्षामा घोषणा गर्दछ कि तिनीहरू दुई अहिले डेटिङ गर्दै छन्।
यसले कक्षामा ठूलो अशान्ति निम्त्याउँछ र सबैजना चकित र भ्रमित हुन्छन् कि यो वास्तवमै भइरहेको छ! याम यस्तो सुन्दर र सुन्दर केटी छ, त्यसैले यो धेरै अनौठो देखिन कि उनी संग बाहिर जान्छ जुनिची उनको स्पष्ट हाई स्कूल स्थिति दिए।
Hajimete no Gal को अन्त्य
अब अन्त्य हुन्छ Hajimete no Gal धेरै निर्णायक थियो, संग याम र जुनिची सँगै समाप्त हुन्छ। यो एक प्रकारको सुखद अन्त्य पनि हो। यो जस्तो छैन Scums इच्छा जहाँ अन्त्य धेरै निराशाजनक छ र दुई मुख्य पात्रहरूले उनीहरूले चाहेको कुरा पाएनन्। दुबै मुख्य पात्रहरूले उनीहरूले चाहेको कुरा पाए।
यो केहि को लागी राम्रो संकेत नहुन सक्छ एनिमे प्रशंसकहरूले यसको अर्थ हुन सक्छ एनिमे यो भन्दा लामो समय सम्म जारी रहनेछैन। तर, धेरै कारणले यस्तो नहुन सक्छ।
यामे युकाना र जुनिची हाशिबा
हाजिमेट नो गल मंगा स्थिति
को रूपमा 26th अक्टोबर 2021, त्यहाँ भएको छ 13 भोल्युम को मंगा लेखिएको। खुसीको खबर यो हो कि केवल5मंगा Hajimete no Gal को लागि खण्डहरू अनुकूलित गरिएको छ। तपाईले तलको छविबाट देख्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ धेरै धेरै मंगा भोल्युमहरू छन् Hajimete no Gal जुन प्रकाशित भएको छ । त्यसरी नै यसको अर्थ हुन्छ Hajimete no Gal एक सिजन2प्राप्त हुनेछ?
हाजिमेट नो गल सिजन २
यो म्यागना परिक्रमा गरिएका भोल्युमहरू मंगा खण्डहरू हुन् जसद्वारा मूल Anime Hajimete no Gal सिर्जना र रूपान्तरण गरिएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ अझै7थप खण्डहरू छन् मंगा अनुकूलन गर्न। यसका साथै म यो पनि थप्न चाहन्छु कि मंगा अझै जारी छ। यो अझै समाप्त भएको छैन र त्यसो गर्ने कुनै संकेत देखाउँदैन।
के हाजिमेटे नो गल सिजनले सिजन २ पाउँछ?
Hajimete no Gal एक धेरै लोकप्रिय एनिमे थियो जुन मैले आफैलाई धेरै रमाइलो गरे। Hajimete no Gal यो बाहिर आउँदा ट्राफिक भयो र यो केवल ठूलो र ठूलो बढ्यो।
मुख्य चरित्र मनपर्ने थियो, हरेम र फ्यान सेवा कार्य राम्रोसँग प्राप्त भयो र विरोधी (त्यहाँ मुख्यतया श्रृंखलामा कुनै विरोधीहरू छैनन्) युकाना शो हेर्ने लगभग सबैको लागि हिट थियो। हामीले पहिले भनेझैं, एनिमले मात्र अनुकूलन गरेको छ २० खण्डहरू को मंगा, एक विशेष OVA को साथ साथै जारी गरिएको छ।
त्यसोभए7भोल्युमहरू अझै अनुकूलन गर्न, र सँग मंगा अझै चलिरहेको छ र सुस्त हुने कुनै संकेत देखाउँदैन, यो निश्चित देखिन्छ कि एक सिजन2Hajimete no Gal उत्पादन को लागी लाइन मा निश्चित छ। या त मूल उत्पादन कम्पनी द्वारा जोतारो इशिगामी इचिगो यामादा वा अर्को उत्सुक उत्पादन कम्पनी भूमिका लिन इच्छुक।
यद्यपि यो अन्तिम एपिसोड पछि धेरै समय भयो Hajimete no Gal जारी गरिएको थियो, यो निश्चित रूपमा यसको मतलब होइन एनिमे जारी रहनेछैन। तल4मुख्य कारणहरू छन् Hajimete no Gal एक सेकेन्ड प्राप्त गर्नुपर्छ:
धेरै भएको छ एनिमे जुन लामो समयदेखि रोकिएको छ । विश्राम पछि मात्र फर्कन। कालो लगून र पूरा धातु दबाइ सिद्ध उदाहरण हुन्।
एनिमेले5खण्डहरू अनुकूलित गर्यो मंगा, जबकि अझै7थप खण्डहरू अनुकूलित हुन बाँकी छ।
सबै भए पनि Hajimete no Gal मङ्गा ढाकिएको थियो, यो आज सम्म बिंग लेखिएको छ।
को लागि प्रचार Hajimete no Gal त्यहाँ छ र एक सिजन2को लागि चाहना धेरै उल्लेखनीय छ, दोस्रो सिजन एक राम्रो विचार हो।
यी कारणहरूका लागि, हामी संक्षेप गर्छौं कि दोस्रो सत्र Hajimete no Gal धेरै व्यावहारिक र पूर्ण रूपमा सम्भव छ। अर्को सिजन सिर्जना गर्नका लागि सबै मुख्य कम्पोनेन्टहरू त्यहाँ छन्, केहि आशाको साथ, हामीले दोस्रो सिजन हेर्नुपर्दछ!
हाजिमेट नो गल सिजन २ कहिले रिलिज हुन्छ?
CV अनुमान छ कि एक सिजन2को उत्पादन Hajimete no Gal को केहि थप खण्डहरू एक पटक सुरु हुनेछ मंगा रूपान्तरण गरिएको छ। कम्तिमा 1 वा 2. यी हुन आवश्यक बाँकी भोल्युमहरू हुन्। सबै7लाई अनुकूलन गर्न आवश्यक पर्दैन, तिनीहरू5खण्डहरूबाट सुरु हुन सक्छन्।
त्यसोभए, आवश्यक छ कि7मध्ये5लेखिएको छ, त्यसपछि सिजन2को समय Hajimete no Gal एकदम नजिक छ। उत्पादन कम्पनी द्वारा अनुकूलित गर्न पर्याप्त सामग्री लेखिएको संग, यो निश्चित छ कि सिजन22022 को आसपास रिलीज हुनेछ। हुनसक्छ डिसेम्बर मा पनि, OVA जारी भएको थियो।
भन्ने अनुमान गर्छौं Hajimete no Gal सिजन2यो समय वा समयमा रिलीज हुनेछ 2022। हामी आशा गर्छौं कि यो लेखले तपाईलाई ठूलो मद्दत गरेको छ, हामीले तपाईलाई भनेको सबै कुरा तथ्यपरक र सत्य हो। र हामी पनि विश्वास गर्छौं कि हाम्रो निष्कर्ष यथार्थपरक र आधारित छ। हामी आशा गर्छौं कि यो लेख तपाईलाई जत्तिकै उपयोगी भएको छ। कृपया यो लेखलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र शुभ दिनको लागि नबिर्सनुहोस्।
साइट लेखकहरूलाई समर्थन गर्न क्र्याडल दृश्य व्यापारिक वस्तुहरू खरिद गर्नुहोस्
अघिल्लो प्रविष्टि Yame Yukana चरित्र प्रोफाइल
अर्को प्रविष्टि कागुया समा सिजन ३ रिलिज मिति + नयाँ पात्रहरू